Dental Laboratory Technician Job Description / Izabelo Futhi Duty Sample – JobDescriptionSample.org
Ikhaya / Ukukhangisa / Dental Laboratory Technician Job Description / Izabelo Futhi Duty Sample
Dental Laboratory Technician Job Description / Izabelo Futhi Duty Sample
superadmin Juni 28, 2016 Ukukhangisa 2 Amazwana 499 Ukubukwa
Ukugxilisa Iron Futhi rebar Abasebenzi Job Description / Izindima Futhi Ukuziphendulela Sample
Dermatologists Job Description / Umthwalo Isifanekiso Futhi Izindima
Ukugaya abese ezipholisha Abasebenzi, Hand Job Description / Duty Isifanekiso Futhi Izindima
Electronic Izinsiza kusebenza Izifaki futhi abalungisi bethempeli, Motor Vehicles Job Description / Imisebenzi kanye Duty Isifanekiso
Sebenzisa, ukuhlonza, noma ukuvikelwa ukulungisa, kubonakale, ukuxhumana, noma umzila segiya izimoto.
Splice izintambo ne ukwehlisa noma imimese impintshisi, futhi solder uxhumo okuxhunyiwe igiya.
Thola noma buyisela izinkinga ngamathuluzi okuzenzakalelayo, ezifana umsindo, umzila, ukuxhumana, futhi imishini zokuphepha, abasezimotweni.
Lisebenzisa Luhlolo ingcaca, ukuzohlola ukuhlolwa okuzenzakalelayo noma amandla izinhlelo ukuthola futhi ukuthola eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa nokuhlolwa zomculo ezifana isibonelo oscilloscopes futhi voltmeters.
Sebenzisa imishini kanye okungeziwe ezifana imishini nokuxhumana, imishini navigation, stereos , nokuphepha izinhlelo.
amanani cishe yesondlo ngokuvumelana izingxenye kanye nomsebenzi amanani.
Cela amacebiso amaklayenti ukubheka eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa’ Dynamics.
Phatha fresh ilawudispikha kagesi kanye amakhebuli.
Ucezu availabilities futhi izimbobo sokuprakthiza ababezithola phansi benze amathuluzi kanye nokufakwa, kuqashwa umzimba ngogesi futhi imizila.
Exchange futhi azihlanzele izakhi ukuthi kukhona kagesi noma amandla.
Susa, flooring, namakamelo umnyango bese wengeza nemisindo-iyavuleka izindawo ezingenalutho, izingcezu ufaka ukuthi kukhona zasendlini.
Umbiko isixhumanisi phakathi ukuhlaziya izivivinyo.
Yakha fiberglass noma lekushuca ezivalekile for avele izingxenye, futhi ebalungele yobukhulu imoto.
Izenzo Umsebenzi Ukufaneleka
Ukufunda Isifundo sokuqondisisa-Sivisiso okuqukethwe okudalwe futhi izigaba amadokhumenti ezihlobene nomsebenzi.
Active-Ukulalela-NEKWETFULA ukuqaphela lonke ukuthi ezinye-abantu Okwamanje bathi, ukuthola isikhathi ukuqaphela amaphuzu kokuba ekhiqizwa, obuza imibuzo njengoba enhle, futhi ungalokothi kokuphazamisa ngezinye izikhathi ayilungile.
Ukukhiqiza-yokuxhumana ngempumelelo olotshelwe hhayi njengokungabafanele ukuswela isixuku.
Ukuxhumana-Ukukhuluma nabanye ukubalula Imininingwane kahle.
Maths-Isebenzisa izibalo ukuxazulula izinkinga.
izixazululo Technology-Lisebenzisa nemihlahlandlela yezokwelapha ukuxazulula izinkinga.
Ezibucayi-Thinking-Ukusebenzisa ukwahlulela nezizathu ukubona ubuthakathaka futhi izinzuzo izindlela, Imiphumela noma ongakhetha ukukhetha izinkinga.
Active-Learning-Ukuqonda imiphumela lelwazi esisha esiphathelene kokubili zakamuva futhi oluzayo izinkinga kanye izinqumo.
Ukufunda Strategies-Isebenzisa ngitsatse amasu coachingORinstructional namasu buyafaneleka isimo lapho usukwazi ukudlala kahle noma ukufundisa izinto fresh.
Ihlola-Ihlola / ukusebenza Ukuhlola ukuzinikela, abanye abantu, noma amabhizinisi ukukhiqiza izinguquko noma wenza izenzo zokulungisa.
Komphakathi Perceptiveness-Ukuqaphela othersA ukuthambekela ngoba benza kungani uphendule nokwazi.
izenzo Coordination ezidunga maqondana abanye’ imisebenzi.
Azithenge-Ngempumelelo abanye ukuba bathuthukise izenzo noma imicabango yabo.
Settlement-Ukuthola abanye ndawonye futhi abafuna buyisana okwahlukile.
Sibayala-Ukuqeqesha abanye indlela ukuthatha isinyathelo.
Amasevisi Orientation-Nakanjani uzama ukuthola izindlela ezisiza abantu.
Inxanxathela okuxazulula izinkinga Ukuthola izindaba eziyinkimbinkimbi futhi ucwaninga amaqiniso ukuthi ixhumene nokuthuthukisa uhlolisise izindlela futhi basebenzise amakhambi.
Izinqubo Ucwaningo-Ukuhlaziya izidingo ezithengiswayo nawo udinga ukwakha design.
Engineering Design-Technology ukunikeza umuntu futhi sithele noma ukujwayeza amadivayisi izifiso.
Amathuluzi amathuluzi Ukukhethwa-Ukunquma futhi imishini sika uhlobo waba isidingo ukwenza umsebenzi.
imishini Isitolimende-Ifaka, igiya, izintambo, noma izinhlelo ukugcwalisa izici.
izinhlelo Ifaka ikhodi-Publishing ikhompyutha ekusebenziseni ahlukahlukene.
Operations izici Monitoring zokubuka, dials, noma ezinye izimpawu ukuze uqiniseke kukhona imishini ukusebenza kahle.
Inqubo kanye Phatha-nokusingatha imisebenzi amadivayisi noma imikhiqizo.
Isisetshenziswa Isondlo-Buciko ukunakekela imikhiqizo nokubona lapho futhi hlobo luni lwe ukulondolozwa iyadingeka.
Ukuxazulula-Inquma izizathu yokusebenza amaphutha futhi ekunqumeni ukuthi isiqondiso ukuya ngale.
Ukubeka-Ukubuyisela izinhlelo noma onobuhle usebenzisa amathuluzi adingekayo.
Quality Control Ukuhlolwa-Buciko izivivinyo nokuhlolwa lwezinto, izinkampani, noma izinqubo ukulinganisa kahle noma izinga.
Ukuhlakanipha kanye nokuthathwa kwezinqumo-Ukucabanga izindleko engaqhathaniswa nezinto ezinkulu mayelana ukuziphatha kukhona kungenzeka ukuthola lowo kangcono.
Ukuhlaziya-Ukunquma indlela uhlelo kufanele zisebenze futhi indlela izinguquko ezizungeze, imisebenzi, kanye izimo ezingaba nomthelela imiphumela.
Izindlela izinyathelo Ukuhlolwa Ukuthola noma izimpawu ukusebenza uhlelo futhi ngokuhambisana shaqa umshini, efanele noma ukuziphatha okudingekayo ukuthuthukisa ukuphumelela.
Isikhathi Ukuphathwa-nokusingatha ngesikhathi abanye kanye isikhathi oneis siqu.
Ukuphathwa lwezezimali Resources-Ukunquma ukuthi iholo lingase etshaliwe ukuba umsebenzi igcwaliswe, futhi yokuthengisa lezi izindleko.
Ukuphathwa Material Amafa-Ukuthola nokugcina maqondana nokusetshenziswa efanelekayo insiza, igiya, futhi izingxenye ezidingekayo sina musa akhethiwe isebenze.
abantu Ukusebenza kwezinhlaka Abasebenzi Resources-Leading ngenkathi they, wokusungula, kanye nomsebenzi zishukumise, ukukhomba abantu okungcono kakhulu umsebenzi wenu wokuziphilisa.
Ezemfundo Ukufaneleka Experience Ukufaneleka
Diploma High-School (noma kukaGedaliya noma Senior High School kwefrakshini Certification)
Ngaphezu kwe 2 iminyaka, kakhulu ngendlela futhi kuhlanganise iminyaka EZINE
Umsebenti Command Amakhono Imfuneko
ukuphikelela – 91.63%
umzamo – 91.99%
Ubuholi – 89.64%
Usizo – 93.52%
Ukukhathalela Abanye – 92.54%
Direction Komphakathi – 82.73%
Ukuzithiba – 93.23%
ingcindezi Tolerance – 91.72%
nokwethembeka – 93.72%
Ukubhekisisa Ukujula – 91.48%
Amandla – 88.15%
Liberty – 81.72%
Ukudala – 92.09%
Ukucabanga – 92.53%
Solar Izifaki Thermal Futhi Ochwepheshe Job Description / Imisebenzi Futhi Isibopho Sample
Faka noma buyisela izinhlelo ugesi welanga eklanyelwe buthelela, esitolo, and circulate pv-warm water for …
Pingback: 4 Questions To Ask Yourself If Exact Same Land Work - TG ...(Dandanah, Hillsburg, Mazaj, BoomBoom)
Pingback: Marketing Job Description – Lideta Subcity